April 2019 ⋆ Lovely Myanmar
ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး MMA ဆုနှစ်ဆုမှာ ဆန်ကာတင်စာရင်းပါဝင်နေတဲ့ အောင်လအန်ဆန်
By Aung Aung on Tuesday, April 30, 2019
ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး MMA ဆုနှစ်ဆုမှာ ဆန်ကာတင်စာရင်းပါဝင်နေတဲ့ အောင်လအန်ဆန် အောင်လအန်ဆန်ကို ” VOTE ပေးရန်” ဆိုတဲ့ နေရာကို ကလစ်နှိပ်ပြီး ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ အောင်လအန်ဆန်ကို မဲပေးရွေးချယ်ပေးနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။One Championship က ကျင်းပလျက်ရှိတဲ့ MMA ပြိုင်ပွဲမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နေတဲ့ မြန်မာ့စပါးအုံး အောင်လ အန်ဆန်အနေနဲ့ Fighter Only Magazine က ပေးအပ်ချီးမြှင့်မယ့် World MMA Awards ဆုပေးပွဲမှာ ဆုနှစ်ဆု အတွက် ဆန်ကာတင်စာရင်း တင်သွင်းခြင်း ခံထားရတယ်လို့ World MMA Awardsရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ သိရပါ တယ်။အောင်လအန်ဆန်အနေနဲ့ ဆန်ကာတင်စာရင်းပါဝင်နေတဲ့ ဆုအမျိုးအစားတွေကတော့ Charles “Mask” Lewis Fighter of the Year နဲ့ …
ကော့သောင်း ပင်လယ်ပြင်တွင် ကျပ်သိန်းပေါင်းသုံးသောင်းကျော်ဖိုးရှိ ICE မူးယစ်ဆေးများထပ်မိ
By Aung Aung on Monday, April 29, 2019
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကော့သောင်းမြို့နယ်၊ သံကျွန်းအနောက်ဘက် ၁၅၄ မိုင်ခန့်အကွာ ပင်လယ်ပြင်တွင် ကျပ်သိန်း ပေါင်း ၃၀၉,၅၀၀ ခန့်တန်ဖိုးရှိ ICE မူးယစ်ဆေးများအား လူ ၇ ဦးနှင့်အတူ ဧပြီ ၂၆ မနက်ပိုင်းက ဖမ်းမိခဲ့ကြောင်း ကော့ သောင်းမြို့မရဲစခန်းက ပြောသည်။ ယခုအကြိမ်သည် ကျပ်ဘီလီယံ ဆယ်ချီသည့် ICE များအား ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ဖမ်းမိခြင်းဖြစ်ပြီး ပြီးခဲ့သည့် မေလ ၂၄ ရက်နေ့ကလည်း Refined Chinese Tea တံဆိပ်ပါ ထုပ်ပိုးမှုပုံစံတူ ICE မူးယစ်ဆေး တန်ဖိုးကျပ် ၃၄ ဘီလီယံကျော်ဖိုးကို ကော့သောင်းပင်လယ်ပြင်တွင် ဖမ်းမိခဲ့ထားသည်။ ကော့သောင်းမြို့မရဲစခန်းက ရဲအုပ် ဇော်မိုးအောင် က “ အမှုနှစ်ခုက ဆက်စပ်မှုရှိမရှိတော့ စစ်ဆေးနေတုန်းပဲဖြစ်လို့ ပြော လို့မရသေးဘူး၊ …
ဒဂုံမြို့သစ်မြို့(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်၌ ရထားနှင့် မော်တော်ယာဉ်ကြီး ၁ စီးတိုက်မှုဖြစ်ပွား
ဒဂုံမြို့သစ်မြို့(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်၌ ရထားနှင့် မော်တော်ယာဉ်ကြီး ၁ စီးတိုက်မှုဖြစ်ပွား ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၇ ရက်နေ့ ၀၃၄၅ အချိန် ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်၊ လေးဒေါင့်ကန် ရပ်ကွက် ဒါးပိန်ဘူတာနှင့် လေးဒေါင့်ကန်ဘူတာကြား မိုင်တိုင်(၁၆/၇-၈)ကြား၊ ရန်ကုန်-ပဲခူး အမှတ်(၂)လမ်းမကြီးပေါ်ရှိ တရားဝင်ရထားသံလမ်းကူးဂိတ်၌ အမှတ်(၃၆)အစုန် မော်လမြိုင်- ရန်ကုန် အမြန်ရထားဖြတ်သန်းရန်ဂိတ်စောင့် ဦးအောင်ခန့်ချစ်မှ ဂိတ်တံခါးအား ပိတ်နေစဉ် အရှေ့မှ အနောက်သို့ ရထားသံလမ်းအား ဖြတ်သန်းမောင်းနှင်သော စောမောင်မောင်အေးမြင့်(၂၃)နှစ်၊ (ဘ)ဦးမြင့်အောင် (၁၀၄)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်နေသူ မောင်းနှင်သည့် YGN-4N/×××× Dowfan ၂၂ ဘီး တွဲယာဉ်နှင့် ရထားစက်ခေါင်းတို့ တိုက်မိကာ မော်တော်ယာဉ်သည် ၁၀၀ ပေခန့် ရထားနှင့် ချိတ်ပါ သွားခဲ့ဖြင့် ယာဉ်မောင်းမှာ ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကြောင့် ရထားစက်ခေါင်းယာ ရှေ့ပိုင်း …
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအပါအဝင် တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် အချို့တို့တွင် မိုးထစ်ချုန်းရွာမည်ဟု မိုး/ဇလ ထုတ်ပြန်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအပါအဝင် တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် အချို့တို့တွင် မိုးထစ်ချုန်းရွာမည်ဟု မိုး/ဇလ ထုတ်ပြန် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအပါအဝင် တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် အချို့တို့တွင် မိုးထစ်ချုန်းရွာမည်ဖြစ်ကြောင်း မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ ဧပြီ ၂၈ရက် ညနေ ၄နာရီ အချိန် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။ မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ ဧပြီ ၂၉ရက်နေ့အထိခန့်မှန်းချက်အရ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်း၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးနှင့်ကချင်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာကျဲကျဲနှင့် စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကွက်ကျား မိုးထစ် ချုန်းရွာမည်ပြီးရွာရန်ရာနှုန်း(၈၀) ဖြစ်ကြောင်း နှင့် ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်တို့တွင်တိမ်အသင့်အတင့် ဖြစ်ထွန်းမည်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။ ထို့အပြင် ဧပြီလ ၃၀ရက်နေ့အထိ ခန့်မှန်းချက်အရ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာကွက်ကျားမှနေရာကျဲကျဲ မိုးထစ်ချုန်းရွာနိုင်ကြောင်း မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ကိုလင်း …
မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် မိုဇမ်ဘစ်တွင် လူ နှစ်သိန်းခန့် အရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေ
မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် မိုဇမ်ဘစ်တွင် လူ နှစ်သိန်းခန့် အရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေ ================================== ပမ်ဘာ ဧပြီ ၂၈ ပြီးခဲ့သည့်ရက်ပိုင်းများအတွင်းက အင်အားပြင်းမုန်တိုင်းဝင်ရောက်တိုက်ခတ် ခဲ့မှုနှင့်ကြုံတွေ့ခဲ့သောမိုဇမ်ဘစ်နိုင်ငံအတွင်း ၌ အရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေသူဦးရေ မှာ နှစ်သိန်းခန့်ရှိကြောင်း ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ က သတင်းထုတ်ပြန်သည်။ မုန်တိုင်းဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ပြီးနောက် ရေလွှမ်းမိုးမှုများဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကြောင့် မိုဇမ်ဘစ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတွင် ပိတ်မိနေ သူများအား အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ် ငန်းစဉ်များ လုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိသည်။ တစ်လအတွင်း အင်အားပြင်းမုန်တိုင်းနှစ်ခု ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်မှုနှင့်ကြုံတွေ့ခဲ့သည့် မိုဇမ်ဘစ်နိုင်ငံအတွင်း၌ ကြီးမားသော ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုများနှင့်ကြုံတွေ့ခဲ့သည့်အပြင် စားနပ်ရိက္ခာလိုအပ်ချက်မြင့်မားလာခြင်း၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ် ခြင်းများကြောင့် နိုင်ငံတကာအကူအညီ များစွာရယူရဖွယ်ရှိနေသည်။ NG(Ref; USA Today) Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန် မုနျတိုငျးဒဏျကွောငျ့ မိုဇမျဘဈတှငျ လူ နှဈသိနျးခနျ့ အရေးပျေါအကူအညီလိုအပျနေ ================================== ပမျဘာ ဧပွီ ၂၈ ပွီးခဲ့သညျ့ရကျပိုငျးမြားအတှငျးက အငျအားပွငျးမုနျတိုငျးဝငျရောကျတိုကျခတျ …
ငွေကြေးအခက်အခဲကြုံတဲ့အခါတိုင်း ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ ရွတ်ဆိုလိုက်ရင် ချက်ချင်း ပြေလည်သွားစေတဲ့ လာဘ်ရွှင် ဂါထာတော်
ငွေကြေးအခက်အခဲကြုံတဲ့အခါတိုင်း ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ ရွတ်ဆိုလိုက်ရင် ချက်ချင်း ပြေလည်သွားစေတဲ့ လာဘ်ရွှင် ဂါထာတော် ငွေကြေးအတွက်စိတ်ပူနေရတာလား၊ ငွေကြေး လာဘ်လာဘတွေ ပိတ်ဆို့နေတာလား ယုံကြည်မှုနှင့် ရွတ်ဆိုသင့်သော အရဟံပဋ္ဌာန်း လာဘ်ပွင့်ဂါထာတော်တရားဓမ္မ…အကြွေးဆပ်စရာရှိနေတာလား? အကြွေးတွေမရပဲဖြစ်နေတာလား? ငွေကြေး လာဘ်လာဘတွေ ပိတ်ဆို့နေတာလား? ငွေကြေးအတွက်စိတ်ပူနေရတာလား? သောကများနေရတာလား? ဤဂါထာကို ရွတ်ဖတ်မယ်ဆိုရင် အဓိဌာန်တင်ပြီး ရွတ်ဖတ် ပူဇော်ရပါမယ်။ တစ်နေ့ကို ၂၄ခေါက်ရွတ်ဆိုရပါမယ်။၂၄ရက်တိတိ နေရာမှန် အချိန်မှန်ရွတ်ဆိုရပါမယ်။ မိမိ မွေးနေ့ကစတင်ပြီး ရွတ်ဆိုရပါမယ်။ ထိုရွတ်ဖတ် အဓိဌာန်ဝင်နေသော ကာလအတွင်းမှာ မိမိတက်နိုင်သော နှစ်သက်ရာဒါန တစ်ခုပြုပေးရပါမယ်။ အဖျက်များသောကြောင့် ဇွဲကောင်းဖို့ ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ရှိဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီ အချက်တွေလိုက်နာနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ သင့်အတွက် ငွေကြေး လာဘ်လာဘကံပွင့်ဖို့ မဝေးတော့ဘူးလို့ ပြောလို့ရပါပြီ။ အလုပ်မရှိပဲနှင့်တော့ ငွေကြေးများများ လိုချင်လို့တော့မရဘူးပေါ့ဗျာ။ ကိုယ့်ရဲ့ပိတ်ဆိုနေတဲ့ ငွေကြေးကံများ ရသင့်လျှက်ကြန့်ကြာနေသော …
အသတ်ခံရတဲ့ ကလေးမသည် မနေ့က ည ၁၁ ထိ အကောင့်လေးသုံးသွားသေးတယ်နော်
မြင်းဖြူနှစ်ကောင်ဆေးတိုက်ဆိုပီး သတင်းတတ်လာတော့လေ သူတို့လေးတွေ မဖြစ်ပါစေနဲ့ဆိုပီး သိသိရက်နဲ့ ဆုတောင်းနေတာ သတင်းတင်တဲ့အမကို messenger ကနေ သူတို့ပုံပြ လှမ်းမေး ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ ကျမလေ စိတ်ထဲ ဘယ်လို မှန်းတောင်မသိတော့ဘူး။ ကလေးမလေးက ကျမ နဲ့ပြင်နေကျ ဖောက်သည်လေးပါ။ သဘောလည်းကောင်းပါတယ်။ သူ့ယောက်ကျားကလည်း အေးအေးလေးရယ်။ မှတ်မှတ်ရရ ၁၁လပိုင်းကမှဘွဲယူထားတာလေ။ အဲအချိန်မှကလေးကမွေးပီးစရှိသေး။ လူမဆန်ကြလိုက်တာ နော်။ တရုတ်သိုင်းကားတွေမှာလေ ကလေးပေါက်စလေးဆို ချန်ထားကြသေးတယ် ။ ခုချိန် ကလေးကရှိမှ ၉လ ၁၀လပေါ့။ လူစိတ်မရှိဘူး။မိဘတွေနဲ့ဘယ်လိုရန်ညှိုး ရှိရှိ ကလေးကိုတော့ထားခဲ့ပါလားဟယ်။ ဆေးတွေကြောင်နေတာလို့လာမပြောနဲ့။ ဆေးတမျိုးထဲနဲ့ သေတောင်မကြောင်ဘူး။ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသတ်တာနေမယ် ။ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးအတွက် လှုံ့ဆော်ပေးကြပါနော်။ကလေးလေးကချစ်စရာလေး။ အသတ်ခံရတဲ့ကလေးမသည်မနေ့က ည၁၁ထိ နောက်ဆုံး EPC ကြေငြာချက်ကို share သွားပါတယ် ။ …
နာဂစ်ထက် ပိုမိုပြင်းထန်သည့် ဖန်နီမုန်တိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ ဝင်ရောက်နိုင်
နာဂစ်ထက် ပိုမိုပြင်းထန်သည့် ဖန်နီမုန်တိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ ဝင်ရောက်နိုင် Sunday, April 28, 2019 နာဂစ်မုန်တိုင်းထက် ပိုမိုပြင်းထန်သည့် ဖန်နီမုန်တိုင်းသည် ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းသို့ ဝင်ရောက်နိုင် တယ်လို့ မိုး/ ဇလ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကျော်မိုးဦးက Opinion Leaders Media ရဲ့ မေးမြန်းမှုကို ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ “ လက်ရှိ သချာင်္မော်ဒယ်အခြေပြု စက်တွေရဲ့တွက်ထုတ်မှုအရ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံဘက်ကို ဝင်ဖို့များတယ်။ ကမ်းကို အစောဆုံး ၅ ရက်နေ့ ၊နောက်ကျရင် ၆ ရက်နေ့ လောက်ဝင်မယ်။ အပြင်းဆုံးက တစ်နာရီ မိုင် ၁၅၀ နည်းနည်း ကျော်နိုင်တယ်။ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ ၁၁၀၊ ၁၂၀ လောက်ဖြစ်နိုင်တယ်။ နာဂစ် တုန်းက တစ်နာရီ မိုင်၁၂၀ နှုန်းလောက်တိုက်တယ်။ …
မန္တလေး NIMI Drink japan ဆိုင်ကို မျက်နှာဖုံးစွပ်လူ (၆)ဦးက မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်စွာဖျက်စီးပြီး ခြိမ်းခြောက်စာ ကပ်သွားမှုဖြစ်
မန္တလေးက NIMI Drink japan ဆိုင်ကို မျက်နှာဖုံးစွပ်လူ (၆)ဦးက ဝင်ရောက်ဖျက်စီးပြီး ခြိမ်းခြောက်စာ ကပ်သွားမှု မန္တလေးက ဆိုင်တစ်ခုမှာ မျက်နှာဖုံးစွပ်လူ (၆)ဦးက မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်ဆန် ရုပ်ရှင်ဆန်ဆန် ဝင်ရောက်ဖျက်စီးပြီး ခြိမ်းခြောက် စာကပ်သွားမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ မန်းလေးမြို့ မှာရှိတဲ့ NIMI Drink japan ဆိုင်ကို မျက်နှာဖုံးစွပ်လူခြောက်ယောက်မှာ ရိုက်ခွဲဖျက်စီးခြိမ်းခြောက်မှူဖြစ် 26-4-2019 ည၉နာရီ၁၀မိနစ်အချိန်တွင် မျက်နာဖုံးစွတ်ထားသော လူ၆ယောက် လူတစ်စုမှာ ဆိုင်အတွင်းရှိသောပစ္စည်းများကို ရိုက်ခွဲပြီး ချိန်းခြောက်စာများကို ဆိုင် နံရံတွင်ကပ်သွားပါသည်။ မင်းမဲ့ စရိုက်ဆန်စွာဖျက်စီးသွားမှူများကို ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု သိရသည် ref အမှန်တရားဘက်တော်သားများအုပ်စု #ခရီးသည် အိုဘယ့်မြန်မာပြည် မန်းလေးမြို့ မှာရှိတဲ့ NIMI Drink japan ဆိုင်ကို မျက်နှာဖုံးစွပ်လူခြောက်ယောက်မှာ ရိုက်ခွဲဖျက်စီးခြိမ်းခြောက်မှူဖြစ် …
ဖားကန့်ကနွံကန်ကျိုးပေါက်မှုကြောင့် ကျောက်စိမ်းလုပ်ကွက်တချို့ ရပ်စဲ
ဖားကန့်ကနွံကန်ကျိုးပေါက်မှုကြောင့် ကျောက်စိမ်းလုပ်ကွက်တချို့ ရပ်စဲ ဖားကန့် မော်မောင်းမှော် ကျောက်စိမ်းတူးဖော်ရေး လုပ်ကွက်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီ ၂၂ ရက် က နွံကန်ကျိုးပေါက်ခဲ့လို့ ကျောက်တူးဖော်ရေး ဝန်ထမ်း ၅၅ ဦး သေဆုံးခဲ့ပါတယ်ဖားကန့်က မော်မောင်းမှော်မှာ နွံကန် ကျိုးပေါက်မှု ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက် ကျောက်စိမ်းတူးဖော်နေတဲ့ ကုမ္မဏီ ၁၁ ခု နဲ့ လုပ်ကွက် ၁၇ ခု ကို လုပ်ငန်း ရပ်ဆိုင်းဖို့ အာဏာပိုင်က ညွှန်ကြားထားတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။ နွံကန်ကျိုးပေါက်ခဲ့လို့ လူ ၅၀ ကျော်သေဆုံး သွားပြီးနောက်မှာ အခုလိုကန့်သတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မှော်ဝမ်းကြီးကျေးရွာအနီးက မော်မောင်းမှော်မှာ နွံကန် ကျိုးပေါက်မှု ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက် မြန်မာ့ ကျောက်မျက်ရတနာ ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်းဌာန ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး လာရောက်ကွင်း ဆင်း စစ်ဆေးပြီး၊ …